ATC osisi CNC rawụta igwe
Wood CNC rawụta igwe
Igwe ndị ahụ rutere na ụlọ ọrụ ndị ahịa, yana nzaghachi sitere n'aka onye ahịa, onye na-emepụta igwe na onye na-ere ahịa
Anọghị Ọrụ March. Ibu ụgbọ mmiri ejirila nwayọ laghachi n'ụdị ya, jiri ọtụtụ iwu na ahịa ahịa igwe na-ebupụta n'oge oge ọkụ. Ọtụtụ igwe bịakwara n'ụlọ ọrụ ndị ahịa. Ka anyị leba anya na nzaghachi ndị ahịa. Anyị bụ 13 afọ osisi CNC machi ...
Ọhụrụ Design R8 Auto tool Change osisi ụzọ kabinet eme cnc igwe
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ọnụ ụzọ osisi, kọbọd, kọbọd na arịa dị iche iche, biko chọpụta maka R8 Auto Ngwá Ọrụ Gbanwee igwe eji arụ ọrụ. Nke a bụ anyị ọhụrụ multi-ọtọ woodworking igwe. Igwe a na-eji nhazi dị elu. Ihe kachasị mkpa ya bụ na ọ nwere ngwa ọrụ m ...
A na-ebufe ọtụtụ nnukwu osisi ọrụ na December
9 setịpụrụ igwe cnc igwe arụchaala ma tinye ya na ụlọ ọrụ anyị Onye ọrụ anyị nyere iwu ka 9 setịpụ 1325 osisi cnc, Anyị mechara rụchaa igwe ndị a n'ụlọ ọrụ anyị. Anyị bụ ndị 12 afọ cnc igwe emeputa na ekspootu. Anyị ígwè ọrụ na-exported niile na mba, anyị nwere mgbe-sal ...
Nweta ezigbo nyocha site na ndị ahịa
Nata ezigbo nyocha site na ndị ahịa Elu dị elu bụ ndụ nke ụlọ ọrụ ahụ, teknụzụ ọhụụ bụ ntọala nke ụlọ ọrụ ahụ, ihe ọhụrụ bụ isi ihe na-eweta ọganihu nke ụlọ ọrụ, ọrụ ahịa ahịa dị mma ga-emeri ahịa zuru oke maka ụlọ ọrụ ahụ. Companylọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ...
Ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na-eji igwe arụ ọrụ iji mepụta ihe atụ nke akụkụ anaghị ahụ anya
Ndị ọrụ nọ n'ụlọ ọrụ ahụ na-eji igwe iji mepụta ihe atụ nke akụkụ ndị anaghị ahụ anya Igwe igwe na-akpụ igwe Lamino bụ igwe pụrụ iche eji egbutu ma na-ehichapụ arịa ụlọ emebere. Ọ nwere ike tufuo usoro ntuziaka nke ọdịnala ma dabere na ọrụ aka. Ọ nwere ike ịbụ n'ezie ...
A na-akwakọba ma na-eziga igwe ahụ
A na-akwakọba ma na-eziga igwe ahụ ụbọchị ihu igwe dị mma nke ukwuu, anwụ na-acha, ikuku na-acha, na oge mgbụsị akwụkwọ doro anya. Ọtụtụ ndị ahịa na-abịa ileta ụlọ ọrụ anyị otu otu ọzọ. Ndị ọrụ nọ n'ụlọ ọrụ ahụ na-arụsi ọrụ ike na ọrụ nke aka ha. Hụrụ, ndị ọrụ na t ...
The ụlọ ọrụ ịgụnye gara Tai'an Rift Valley
The ụlọ ọrụ ịgụnye gara Tai'an Rift Valley ternyaahụ, ihu igwe dị mma, ụlọ ọrụ anyị niile mkpara gara njem Tai an. N’ụtụtụ, anyị gara n’ogige a na-a theụ biya, bụ́ nke anyị si na ya mara ihe a na-eme biya na otú e si hazie ya site n’usoro. Nnukwu mech ...
Uru nke igwe ncha CNC
site ha na 20-04-24
CNC ọnwụ igwe, makwaara dị ka nwere ọgụgụ isi efere ngwá akara akara akụrụngwa. Dị ka aha ahụ na-egosi, usoro niile site na ntinye, ịcha, ịmịpu oghere na mpekere nke efere ahụ agwụla n'otu njem. Ọ na-anọchi mmepụta na nhazi akwụkwọ ntuziaka. Yabụ, kedu nke ...
JCUT CNC rawụta igwe mmezi ihe ọmụma
Nsogbu ọdịnala bụ: 1. Igwe ihe osise nke na-enwetụbeghị: njikwa ihe ntugharị ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ nke ọma, ọsọ igwe na-adịghị ngwa ngwa, mmetụta ọrụ adịghị mma, ndụ igwe adịghị mma, oghere Z na-arapara, diagonal njehie buru ibu, na nkuku ghota adịghị mma! Dr ...
R9 usoro CNC ịkwọ ụgbọala igwe R9 usoro CNC ịnya ụgbọ igwe: Ngwaọrụ ọdabara ụlọ ọrụ: ịcha oghere ntụmadị ga-eji maka nhazi osisi ụdị ngwá ụlọ na-akpụ akpụ ịme ngosi uwe nhazi kabinet ụzọ kaboodu ụzọ soft soft ngwugwu ezigbo osisi n'ime ime ụzọ siri ike osisi ngwá ụlọ kọmputa. R7 usoro CNC ...
ỌZ FREE KWES FREER FREE IHE +8618006360664
ỌZ FREE KWES FREER FREE IHE +8615863173380